कुंभ र तुला - धेरै रोचक2संकेत हो। अनुकूलता पूर्ण रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ, यस्तो संघ अक्सर रोमियो र जूलियट को संघ भनिन्छ। तुला र कुंभ - - मानिस तर यो मात्र संघ महिला लागू हुन्छ। तिनीहरूले प्रेम र समझ आधारित हुनेछ जो एक पर्याप्त लामो र बलियो सम्बन्ध, निर्माण गर्न एक राम्रो मौका छ। के हामीलाई आफ्नो अनुकूलता Horoscope भन्नेछु? तुला र कुंभ एकदम भन्दा वर्ण अन्य यूनियन घमण्ड गर्न सक्दैन व्यवसाय सफल हुनेछ, तिनीहरूले धेरै राम्रो हो प्रत्येक अन्य पूरक। यो जोडी पूर्ण तिनीहरूले मुक्त समय खर्च गर्न धेरै मजा, जसलाई साथी को धेरै छ, मान्छे संग मा फिट। यो सम्बन्ध मुख्य सकारात्मक र बन्धन टोक एक निश्चित स्वतन्त्रता लागि खेलकुद, तुला र कुंभ आवश्यक नै स्वतन्त्रता लागि सही साझेदार पहिचान हुनेछ। शाब्दिक गरे यी2वर्ण एकअर्काप्रति, त्यसैले आफ्नो अनुकूलता Horoscope भन्छन्। तुला र कुंभ पहिलो परिचय आपसमा एक अनूठा आकर्षण महसुस हुन सक्छ मा पहिले नै हुन्, ती घण्टा कुरा गर्न सक्षम हुनेछ र छोड्न चाहँदैनन्।
कुंभ पुरुष एकदम हठी एक सम्बन्धमा, यो कहिलेकाहीं प्रगति को chorus अवरोध एक अवसर हुनेछ। उहाँले एक लाइन लीन हुनेछ, र महिला तुला अन्य पक्ष उसलाई प्राप्त गर्न प्रयास गर्नेछ। यो भ्कगडा को तर्फ देखि साधारण व्यापार कुराकानी याद गराउन सक्छ - हेर्नुहोस्, प्रमाण, तथ्य को आफ्नो बिन्दु समर्थन तर्कको प्रदान गर्नेछ। तर, भाग्यवस, कुंभ र तुला अनुकूलता लगभग सिद्ध छ, वा अक्सर भ्कगडा सक्दैन लामो समय र भ्कगडा चाँडै पूर्ण र पूर्ण विकार लागि, अझ ठूलो convergence लागि कारण हुन्छन्। यो सम्बन्ध मा महिला तुला नेतृत्व लागि योग्य हुनेछ, तर मानिस-कुंभ आपत्ति छैन। तिनीहरूले कहिल्यै तिनीहरूले monotonous र दिनचर्या काम प्रदर्शन व्यस्त छन् भने पनि सँगै पट्टाइ लाग्ला।
एक जोडी को साधारण जीवन लामो समयसम्म सुहागरात सदृश सक्छ। तपाईं संयोगले हुन भने अचानक समय एउटा सानो अवधि (यात्रा, छुट्टी) मा जानेबेलामा, को साझेदार पनि परिवर्तन सोच्न छैन। तिनीहरूले साथीहरू, काम बाट पनि अत्यन्तै ऊर्जा र भावनात्मक पोषण प्राप्त, त्यसैले तिनीहरूलाई लागि यो पज छैन, यो मात्र, आफ्नो सम्बन्ध बलियो हुनेछ प्रत्येक अन्य सम्झना गर्न भन्दा गर्नेछ धेरै भयानक छ। को प्रतिनिधिहरु बीच भएको zodiacal सर्कल त्यहाँ भरोसाको एक विशेष प्रकारको छ, ती कुनै पनि, आफ्नो pockets मा rummaging छनकहरू फेला पार्न प्रयास, दोस्रो फोन हेर्न असमर्थ हुनेछ। यहाँ मात्र ईर्ष्या पैदा गर्न सक्छ जो कुंभ र तुला अनुकूलता जस्ता लक्षण, गठन एक रोचक सम्बन्ध छ। महिला - स्केल र मान्छे - कुंभ प्रत्यक्ष मित्रता, भ्रातृप्रेम र flirtation, तर सम्बन्ध रुचि थिएन धारावाहिक प्रेम बीच। तिनीहरूले बाल्न छैन, बाल्न, आफ्नो भावना सार्वजनिक पहिचान बनाउन, तिनीहरूले आफ्नो आधा एकदम आध्यात्मिक affinity छन्।
उल्टो संघ के जो एक महिला मा - कुंभ र मान्छे - तुला? एक स्वतन्त्र सम्बन्ध - यो tandem एक वाक्यांश मा सकिन्छ। यहाँ, दुवै संकेत गम्भीर र चिरस्थायी सम्बन्ध लागि कन्फिगर गरिएको छैन। तर, आश्चर्य कुंभ र तुला अनुकूलता जो यहाँ प्रश्न, धेरै वर्ष को लागि सँगै जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ, र धेरै खुसी छ। यो जोडी घरमा अर्डर मोडेल, वा स्थिरता को एक bulwark रूपमा, एउटा उदाहरण रूपमा उद्धृत कि गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले प्रत्येक अन्य बुझ्न ठूलो हो, र आफ्नो जीवन सँगै खुसीसाथ बस्नेछन् असम्भाव्य छ। महिला - कुंभ छैन कारण पैसा आफ्नो तनावमुक्त मनोवृत्ति आफ्नो ज्याला बारेमा पति र काम "कटौती" हुनेछ। एक मान्छे - तुला उनको सबै उनको धेरै सोख, चासो साझेदारी गर्न तयार, कहिलेकाहीं धेरै असामान्य छ। यहाँ यस्तो, असामान्य रोचक र एकै समयमा एक स्थिर दुई संकेत को संघ छ।
यसको मालिक को नाम दानियल र गुण को अर्थ
1971 - पूर्वी पात्रो मा पशु को वर्ष? 1971 वर्ण को विशेषताहरु
जब विवाह स्वर्गमा छन्: मेष पुरुष र महिला धनु को अनुकूलता
पाठ astromineralogii: पत्थर को के तरिका तुला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो
नक्षत्र क्यान्सर: सुन्दर तारा क्लस्टर बारेमा सबै
विभिन्न एयरलाइन्स एमिरेट्स गर्न मास्को कसरी उड गर्न
अर्नोल्ड Vosloo: आकर्षक नीच
संसारको सबैभन्दा महंगा फुटबल खेलाडी। को फुटबल संसारमा सबैभन्दा कसले पाउँछ?
जहाँ मानिसहरूले मा सेतो रक्त को छवि?
सबैभन्दा राम्रो ल्यापटप 2013। नयाँ उत्पादनहरु को अवलोकन
Sifililis स्थानान्तरण गर्न कसरी विवरण
लेखक Keyt Ferratstsi: जीवनी, रचनात्मकता, पुस्तकहरू र समीक्षा सूची। Keyt Ferratstsi, ", कहिल्यै एक्लै खान"
यस BIOS मा रूपमा जान? यस BIOS कसरी कन्फिगर गर्न: advices
कसरी निकटतम सम्भव समयको लागि जमीन देखि एक कार ड्राइव सिक्न?
को प्वाल मा सानो ट्युमर
शक्ति देख्यो "पर्मा": वर्णन, विशेषताहरु, प्रकार र मूल्यांकन